Chrome 88 inoshandisa kuratidzwa kutsva kusingaenderane neBlock Origin | Linux Vakapindwa muropa
Vagadziri veGoogle vari kutarisira iyo "Google Chrome" webhu bhurawuza ndazivisa kuiswa muC Chrome 88 (inotarisirwa kuvhurwa muna Ndira 19, 2021) yeyechitatu yeiyo manifesto, izvo zvakakonzera kukakavara kwakawanda pakati pevashandisi vekuwedzera bhurawuza, nekuda kwekutyorwa kwebasa rezvakawanda zvinowedzera kuvhara zvisakafanira zvemukati uye chengetedzo.
Inofanira kuonekwa kuti kuenderana nemapulagi anoshandisa iyo yechipiri vhezheni kubva kumanifesto ndichagara kwechinguva. Kupera kwekutsigirwa kweManifest V2 hakusati kwatemwa, asi iyo nguva yekutama ichienda kuchiratidzo chitsva ichagara rinenge gore rimwe chete.
Sechiyeuchidzo, Iyo Chrome inoratidzira inotsanangura kugona uye zviwanikwa zvinopihwa nemapulagi.
Manifesto nyowani chikamu chekutanga chekuvandudza kuchengetedzeka, kuvanzika, uye plug-in kuita. Chinangwa chikuru cheshanduko ndechekuti zviite nyore kugadzira mapurani epamusoro-soro uye akachengeteka uye nekuita kuti zviome kugadzira mapulagi anononoka uye asina kuchengeteka.
Nekuunzwa kweManifest V3, isu hatizobvumidze yakachengetedzwa kodhi Iyi michina inoshandiswa sevhenji yekurwisa nevatambi vakaipa kupfuura matombo ekuona malware eGoogle uye inomiririra njodzi huru kuvanzika kwevashandisi nekuchengetedza.
Kusagutsikana kukuru neiyo manifesto nyowani inoenderana nekupera kwekutsigirwa kwewebhuRequest API yekushandisa yekukiya maitiro, iyo ichaganhurirwa kune yekuverenga-chete maitiro.
Kusarudzika kuchaitwa chete yeiyo Chrome yeiyo Enterprise edition, izvo zvicharamba zvichitsigirwa newebhuRequest API. Mozilla yakafunga kusa tevera iyo nyowani nyowani uye ichachengeta Firefox zvizere ichishandisa webRequest API. Panzvimbo iyoyo, iyo webRequest API yekusefa zvemukati mune nyowani expression yakaratidza chirevo che API chinozivisaNetRequest.
Iyo nyowani yekuzivisaNetRequest API inopa mukana wekunze-kwe-mubhokisi yepasirese yakavakirwa-mukati yekusefa injini inozvimiririra inogadzirisa inodzivirira mitemo, haibvumidze kushandiswa kwetsika kusefa algorithms, uye haibvumidze kumisikidza yakaoma uye inopindirana mitemo zvichienderana nemamiriro ezvinhu.
Sechikonzero chekuchinjira kune chirevoNetRequest API, Zvekunetseka zvakavanzika zvinoonekwa: Neiyo API nyowani, plugins icharasikirwa nekuwana risingaperi kune ese data hova, ayo anogona kusanganisira anonzwisisika ruzivo rwemushandisi.
Google yakaedza kudzikamisa mamwe matambudziko aratidzwa Panguva yekukurukurirana nevagadziri vepulagiji, ndiani achakanganiswa nedecificativeNetRequest API (semuenzaniso uBlock Origin, ane munyori anoona kudonhedzaNetRequest mashandiro asina kukwana kuti plugin ishande nemazvo), inomira kushanda.
Zvinoenderana nezvido zvevagadziri ve plugin, se yakawedzera rutsigiro rwekushandisa kuzivisaNetRequest yeakasiyana-siyana emirawo seti, kusefa nemataurirwo enguva dzose, shandura misoro yeHTTP, shandura zvine simba uye wedzera mitemo, bvisa uye kutsiva paramende yekukumbira.
Iyo nyowani inoratidza zvakare inounza inotevera shanduko iyo inokanganisa plugin kuenderana:
Iko shanduko yekumhanyisa vashandi vevashandisi nenzira yemashure maitiro, izvo zvinoda vanogadzira kuti vachinje kodhi yezvimwe zvekuwedzera.
Iyo itsva granular modhi yekukumbira mvumo: iyo plugin haizokwanisi kumisikidzwa kune ese mapeji panguva imwechete (iyo "all_urls" mvumo yabviswa), asi ichazongoshanda chete mune mamiriro eanoshanda tebhu, ndokuti, mushandisi achafanirwa kusimbisa iro basa re plugin kune yega yega saiti.
Chinja kugadziriswa kwezvikumbiro zvekuyambuka: zvinoenderana neiyo nyowani nyowani, zvinyorwa zvemukati zvekugadzirisa zvichave zvichiteerana nemvumo imwechete seye peji rekutanga mune izvi zvinyorwa (semuenzaniso, kana peji racho risingakwanise kuwana iyo API nzvimbo, ipapo script plugins haizove neiyi yekuwana kana).
Inodzivirira kuitiswa kwekodhi yakadzvanywa kubva kumaseva ekunze (apo iyo plug-in inotakura uye inoita kodhi yekunze).
Finalmente kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo yetsamba, iwe unogona kureva kune yekutanga posvo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 88 inoshandisa chiratidzo chitsva chisingaenderane neBlock Origin